Izindaba - Yikuphi okungcono, i-porcelain emhlophe noma i-porcelain entsha yamathambo, ake nginethule?
I-porcelain tableware yi-tableware ejwayelekile kakhulu etafuleni lezinsuku zonke. Ngokusho kwezinto zokusetshenziswa, i-porcelain tableware ihlukaniswe yaba i-porcelain tableware emhlophe, i-bone porcelain tableware, ne-shell porcelain tableware. Phakathi kwazo, i-bone china tableware ithandwa kakhulu.
I-Bone china ekuqaleni yayibizwa nge-bone china, kepha abantu babenomuzwa wokuthi igama elithi "umlotha" lalingeyona "nenhle", ngakho-ke balishintsha igama labo laba yi-bone china, noma i-bone china ngamafuphi. I-Bone china iqukethe umlotha ongaphezu kuka-40% wezitshalo ezidla utshani futhi iwumkhiqizo womthengi oluhlaza okwemvelo. Uma kuqhathaniswa nobumba olujwayelekile, inqubo eyingqayizivele yokudubula nokuqukethwe yithambo lekhabhoni kwenza i-bone china ibonakale imhlophe, intekenteke, isobala futhi ingasindi. Lapho uthenga i-bone china tableware, ungayihlukanisa ngezindlela ezintathu ezilandelayo.
Okokuqala, ithemba. Umbala wethambo china: ithambo china uqobo limhlophe okakhilimu ngokwemvelo ngenxa yempuphu yethambo, ephuzi kancane emagameni athandwayo. Lesi sici asinakulingiswa nganoma iyiphi enye i-porcelain.
Izinhlobo ezibaluleke kakhulu zobumba emakethe manje, njenge-porcelain emhlophe, i-shell porcelain, ne-pearl porcelain konke kumhlophe okumsulwa. Singachaza okumhlophe okumsulwa njengombala oluhlaza okwesibhakabhaka-mhlophe; okwesibili, onke angamathambo china, kepha kusukela ezingeni lokuphuzi kungatshela okuqukethwe yimpuphu yethambo le-china uqobo. Okwe-bone china, okuqukethwe kwethambo le-powder kuyinkomba ebalulekile yezobuchwepheshe ukuhlukanisa ibanga le-bone china. I-powder eyengeziwe, i-bone china ephakeme kakhulu, futhi umbala we-bone china uvame ukuba mhlophe kakhulu. Ngokuphambene nalokho, uma okuqukethwe kokudla kwethambo kuphansi, ubuphuzi be-bone china uqobo busobala kakhulu.
Okwesibili, iphunga. Umsindo we-bone china: Ngenxa yokukhiqizwa kwayo, kunesici esibalulekile sangaphandle se-bone china, okungumsindo owenziwe lapho i-bone china ishayisana-beka izitsha ezimbili zethanga eliphezulu le-china ezandleni zakho eziyizicaba ukuze zishayisane, naka, I-Bone china iyi-porcelain eshiswe ezingeni lokushisa eliphakeme. Ubulukhuni buphakeme kakhulu. Lolu hlobo lokushayisana ngeke lulimale. Ungashayisana ngokucindezela okuncane. I-china grade esezingeni eliphakeme izokhipha njengokukhalipha njengensimbi ngemuva kokushayisana. Umsindo “we-clang” unqatshiwe, futhi isikhathi se-echo sinde, kanti amanye ama-porcelains enza umsindo ongathandeki “we-ding”, futhi empeleni awukho umsindo.